TENNIS: Novak Djokovic oo cashar u dhigay Rafael Nadal - (HILLAAC.NET) THE BEST INDEPENDENT RELIABLE SOMALI NEWS
June 12, 2021 at 10:36 TENNIS: Novak Djokovic oo cashar u dhigay Rafael Nadal2021-06-12T10:36:47+02:00 CAYAARAHA
(Paris) 12 Juun 2021. Xalay waxaa la daawaday ciyaar ka mid ah kuwii ugu xiisaha badnaa Teeniska kaddib markii kulan taariikhi ah uu magaalada Paris ee caasimadda dalka Faransiiska ku dhex maray Novak Djokovic iyo Rafael Nadal kuwaasoo isku arkay Semi-finalka tartanka French Open.
Djokovic oo haatan ah xiddiga koowaad ee Teeniska dunida ayaa Nadal ku garaacay natiijo ah 3-6, 6-3, 7-6, iyo 6-2 ciyaar socotay afar saacadood iyo 11 daqiiqo, waxaana xiddiga reer Serbia uu haatan fiinaalka ku wajihi doonaan xiddiga Giriigga u dhashay ee Stefanos Tsitsipas.
Tsitsipas oo 22-sano jir ah ayaa ciyaari doonaa fiinaalka Grand Slam markii ugu horreysay xirfaddiisa Axadda kaddib markii uu wareegga nus-dhammaadka kasoo adkaaday Alexander Zverev.
Nadal ayaa xalay laga hor istaagay inuu markii 14-aad hammiyo ku guuleysiga French Open, waxaana soo gaaray guuldarradii saddexaad ee tartankan kaddib 108 ciyaarood oo uu dheelay iyadoo ay xusid mudan tahay in labo ka mid ah guuldarrooyinkaas ay kasoo gaareen Djokovic.
Xiddiga Isbaanishka ah ayaa hoggaanka ciyaarta ahay bilawgeedii, hase ahaatee, 34-jirka xalay guuasha qaatay ayaa dib usoo laabasho wanaagsan sameeyay, waxaana markii uu hoggaanka qabtay adkaatay in laga soo celiyo.
Novak Djokovicayaa guushii labaad ka gaaray Rafael Nadal isagoo sanadkii 2015 ku garaacay wareegga rubac-dhammaadka, xiddiga kale ee Nadal ku garaacay tartana French Open waa Robin Soderling oo 2009 dhegta u diray xiddiga Madrid kasoo jeeda.
« “Barcelona, Juventus & Real Madrid waa sida caruur ka tagtay iskuulka oo kale haddana ka carootay inaan lagu casuumin xaflad dhalasho sidaasna ugu dacwooday booliska” – Ceferin
Soomaaliya oo safaarad cusub ka furatay wadan gacan-saar la leh Turkiga »